Ma joojin karaa aayadaha aad jeceshahay, sax? Taasi waa sida ay dadka u muujiyaan jacaylka. Dadka had iyo jeer doonayaa in dadkoodii ay jeclaayeen in ay ogaadaan inta ay jecel oo iyaga ka maqnaan. Haddii aad daasho oo ka mid ah fariimaha jacaylka jir, laga yaabo in aad jeceshahay in aad baadhid brand soo socda ee fariimaha cusub jacaylka. 3 qaybood lagu daboolay in this page:
Qaybta 1. Fariimaha Love
Qeybta Messages 2. Love dhalashadiisa, saaxiibtiis, saaxiib wiil, xaaskiisa, iyo ninkeeda
Qaybta 3. Sidee inuu ka soo kabsado Messages Love lumay ka iPhone iyo Android Phones
Jeclaada Messages Dhalashada & Love Messages u Girfriend, saaxiib, iyo naagtiisii, iyo Sayga
SMS u Dhalashada
SMS Hindi jacaylka
SMS u saaxiibtiis
SMS Waayo, ninku
Messages Morning Good
Messages cute Love
Messages u saaxiib
Jeclaada Messages Dhalashada
Maalintii gaarka ah ee noloshaada, waxaan doonayaa inaan ku arko adigoo dhoola! Dhalasho wacan, Taan jeclahayay, waxaan aad u jeclahay, oo aan farxo!
Ma jiro joogo ku filan oo ay ku tusaan sida badan waan ku jeclahay, si aad dhalashadiisa waxaan qalbigayga ku siin wanaagsan.
Aad: Aniga ahaan, ma jiraan wax ka khayr badan maanta gaarka ah qofka aan jeclaa wadaaga ay. Dhalasho wacan, Taan jeclahayay!
Sweet! Taas macneheedu waxa aan adduunka waxa uu noqday kula! On maanta gaar ah, oo kuu soo dirayaa dhammaan Taan jeclahayay si aad rabto maanta farxad iyo mar walba. DHALASHO WACAN!
Mid ka mid ah in ka badan sanad ayaa u yimid oo tagtay, ayaa sands waqti sii noqonayaan iska. Your dhalashadiisa ay i xasuusineysaa si aan kuugu sheegno ayaan ugu mahadcelinayaa, waayo, waxaad kasta iyo maalin kasta.
My jacaylka aad u weyn samada iyo sii mool dheer tahay badda. Waxaa ka mid ah adduun & wax aan jeclaa dunida oo dhan. Dhalasho Wacan.
Dhalasho farxad leh in ninka maba garaaca, laakiin waxay keeni kartaa qalbigayga inay u boodboodaan garaaca.
Waxaad kala soo bax ugu fiican aniga igu jiro. Waxaad iftiimin ilaa aan adduunka. Dhalasho Wacan.
Waxaad samayn maalmood ii farxad, waxaad samayn Taan jeclahayay run, Aad baan u badan faraxsan, oo dhan, maxaa yeelay, idinka mid ah. Dhalasho Wacan.
Waxaad tahay nin aad u gaarka ah iyo maanta waa dhalashadaada si Waxaan Ilaah ugu mahadnaqayaa sameeyey aad si kaamil ah, dhalashada faraxsan Taan jeclahayay.
Messages Love in Hindi
Acatrakaa Haagaar doge muskrayenge zarur, Pyar Haagaar Dil se karoge in nibhayenge zarur, Raah ii kitne kante q na ho, Awaz Haagaar Dil se doge in aayenge zarur ...
yakeen itana in apne AAP pe bhi nahi, jitna hai Pyaar tere pe, har saans le Raha Hoon, tere hausalon ke atebaar pe, Dil Diintooda ki aag boojhane ek Baar in Iqra aa, markar bhi Mukharjee jaonga, sadke tere Pyaar pe ...
Tu hi Bata ah Dil tujhe samjhau kaise, Jise Chahta Hai tu isticmaali nazdik Lau kaise, Yu in har tamanna har ehsas hai wo mera, noo Magar ehsas waxaad ko ehsas dilau kaise ...
Liye k Kayse Har yu karte nahi doonayo Hum, Idinku Bat yahi pe Hum karte nahi dhameysatay, Haagaar hmara MSG na ku waari in derin waxaad sochna k Hum apko seegi nahi karte ... waan ku jeclahay
Milna hai Tumse, Khone se Pehle, Kehna hai Tumse, Ruthne se Pehle, Ruthna hai Tumse, Jaane se Pehle, Aur Jeena hai Tumhare acatrakaa, Marne se Pehle ..
Waxaa iska hoogay 'Mili Bhi in Sirf Khuda Ke Darbaar Mein', Aab Tum hi Batao .. Yaaron .. Hum 'Ibaadat Karte Ya Mohabbat' .. !!
Dil Nahi Lagta AAP ko Dekhe Bina, Dil Nahi Lagta AAP ke Bare Me Soche Bina, Aankhe Bhar Aati hai Yeh Soch kar, Qiish Haal Me Hoge AAP Hamare Bina .. !!
Isticmaal Baarish Pasand ku xidhan, Mujhe ii Baarish hoog .. tha Isticmaal barnaamij sharctara ah Pasand, Mujhe Dhaqsada daran hoog .. tha Isticmaal Chup rehna Pasand, Mujhe Boltey daran hoog .. Isticmaalka sab Kuch Pasand tha, Ama Mujhe Sirf hoog ..
Aankhon ii walo Rehne ko yaad nhi karte, Dil ii Rehne walo ki baat nhi karte, Xamari inuu i Roh h AAP Bas gye, Tabhi in Hum Milne ki fariyad nhi karte.
Haal-e-Dil AE dilbar Hum tujhe kaise kahen, Jo dard hai ii Dil isticmaali kaise sahen, Rone se Teri mit Kaahin tasveer na jaye par, Jab dard hai ii Dil si kaise ashk na bahen.
Messages Love u saaxiibtiis & Xaaskiisa (iyada)
Waxaan doonayaa in aan idin sheego in meel kastoon ahay, wax kasta oo dhaca, waxaan mar walba ka fekeri doonaa idinka mid ah, oo markii aan wada qaatay, sida markii aan farxada badneyd. Mar kale ayaan waxan u samayn lahaa, haddii aan doorashada.
Waan ogaa labaad waxaan idiin la kulmay in ay jiraan wax adiga kugu saabsan aan u baahnaa. Soo baxday waxa ay wax kugu saabsan aan joogay oo dhan. Waxa ay aheyd kaliya aad.
Waxa No arrinta dhacday. Waxba ma ahan wixii aad samaysay. Waxba ma ahan wixii aad samayn doonaa. Had iyo jeer waan ku jeclahay doonaa. Waxaan u dhaaran.
Wax macno ah ma leh sida wayn ee aan hadda wada yihiin. Waxaad mar walba waa in fikirradayda. Ma sugi karo inaan idin arko dhowr bilood ka hadda. Waan ku jeclahay in kastoo aan ahay marka laga reebo miles.
Waxaan si buuxda ma muujin karaan sida ugu mahad celinayaa anigu waxaan ahay in aad tahay gabadha saaxiibtay. Waxaad tahay macaan, smart oo quruxsan. Sidee aad ii soo dhacay? Waxaan ahay kaliya qofna laakiin waad i jeclaateen ii. A billion hab oo dhunkaday.
Anigu waxaan ahay bac shaaha iyo aad tahay koob oo biyo kulul aan. In armuu aad ee ka soo bixiyaa ugu fiican ee aniga igu jiro. Waan ku jeclahay.
Waxaan marnaba shaki daqiiqad ee. Waan ku jeclahay. Waxaan aaminsanahay in aad si buuxda. Waxaad tahay mid curiso, sababta aan nolosha.
Ma seexan karaa, oo u maleynayaa waa maxay? aad ee maskaxdayda! kaliya doonaya aad halkan ahaayeen gacmaheyga
Weligay idinma jecelyahay wax badan oo aan sameeyaa, xaq labaad. Mana aha waan ku jeclahay doonaa wax ka yar aan sameeyo, xaq labaad.
Waxaan ahay ninka ugu Aduunyada waxa adduunka in aad leedahay sida aan gabar!
Messages Love Waayo, ninku (isaga)
Waxaan qabaa go'aanka ugu muhiimsan ee aan abid ku qaaday noloshiisa, Waa hagaag, waxaa is guursan in aad, sababtoo ah waxaad tahay qofka ugu fiican dhulka, waxaad jeclaataa hubby!
Si kuwa is-hoosaysiiya iyo daryeel Waxaad tahay, waxaad Iyadoo, waa la wadaago weyn, lammaanaha ugu fiican ee nolosha aan ka codsan kartaa in aad yahay, Thanks for isagoo hubby ugu fiican, dad aad u gaarka ah mahadsanid!
Mar kasta oo la xiro ayaan indhahayga, waxaan wejigiinna aragno macaan. Oo mar alla waxaan qabaa nagu saabsan, anigu ma caawin karo, laakiin dareemaan content. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan qabto midba midka kale, ka wanaagsan ama ka xun ahay.
Hubby Gacaliye, Waxaan ka dhigi laba cabsi aad u ogaato, si aan haysan waji aad u tiro badan si ay u muujiyaan, Laakiin, waxaan si dhab ah kuu jecel yihiin ka qalbigayga, Qofna abid na kala dhigi kartaa, waxaad jeclaataa ugu rarataan culaysyo!
Waad ku mahadsan tahay taagan ii oo i taageeraya, xataa marka dunida oo dhan waa iga gees ah. Xitaa dhan sano ka dib, waxaan kugu kibreen dhihi karaa, 'Ninkayga farxo, waxaad tahay geesi'. Waan ku jeclahay ..
Waad ku mahadsan tahay inuu i kaxayn karo gaadhiga aad jeceshahay, u rinjiyaynta ciddiyaha iyo ii daaweynta sida amiirad ah. Laakiin inta badan dhammaan, waad ku mahadsan tahay ii guursanayeen oo loogu i jecel, waayo qofka aan ahay.
Ilaah wuxuu iga dhigay ogaaday sida barakaysan waxaan ahay. Waayo, isagu wuxuu qofka iigu yaab badan siiyey ninkayga waan ku jeclahay sidaas u badan.
Wax dan ah kama sida adag u wada joogo waa, waxba waa ka xun iyagoo laga reebo.
Waan kuu xiisay doonaa halka aad ka tagtaan, ee waxaan sugi doonaa inaad dib u hesho.
Messages Subax wanaagsan Love
Sunshine Subax wanaagsan. Waxan u malaynayaa in aad ka mid ah oo doonayay in ay kuu sheegaan in waan ku jeclahay. Maalin kasta noqon lahaa sida quruxda badan sida la joogo haddii aad ila joogayba.
Hi qurux badan! Waxaan rajaynayaa in aad ka heli marka aad toosto, waxaan doonayay inaan ha u ogaan i wax badan u jecel oo i marnaba ha u tegi doonaa. Hayso ilmo subax wanaagsan!
Waxan u malaynayaa in aad of Oo maalintii weyn waxaan doonayaa waxa ugu fiican adiga iyo rajada wax iska taga rabto aad.
Ka hor inta aadan bilaabin maalin, waxaan rabnaa in aad dhoolacadeyn jidka oo dhan helaysaan hab iyo dhunkasho iga Sida aan idin soo salaamayaan, ilmahaaga subax wanaagsan!
Waxaan ku soo toosay fikirka saaka ah qoslayay iyo qosol iyo farxad oo dhan in aan ku soo maray, waxaana doonayaa inaan dhaho waan ku jeclahay oo dhan waa mid aad u badan. Subax wanaagsan wadnaha macaan!
Qorax Subax wanaagsan. Waa maalin brand cusub ah. Wax walba oo ay gebi ahaanba ka duwan tahay waxa ay ahayd shalay, marka laga reebo hal shay: Taan jeclahayay aad u.
Waxaad ku noolaan kartaa adiga oo aan qofka la yidhaahdo "aad tahay anigaa", laakiin ma aan qofka "Anigu waxaan ahay kaaga" oo sheegay.
Haddii U tirtirto fariin this hooba bcoz u i jecel. Haddii u badbaadiyo waa hooba bcoz u i dooni .. & haddii u iska indha waxaa hooba bcoz u i.
Waa in aad ahaanayaa u wanaagsan, sababtoo ah aad mar walba socda ee maskaxdayda, waa in aad tuug wanaagsan maxaa yeelay, waxaad qalbigayga soo xaday, oo i had iyo jeer Shooter xun ahay sababtoo ah waxaan mar walba Cayaarin.
Jacaylka .. L = Lake dhibka .. O = Ocean oo ilmo .. V = Valley of Death .. E = End of nolosha ....
Siinin siin password of our Love iyo saaxiibtinimo Cidna, maxaa yeelay, haddii ay u odhan doonaa, password "Waxaan U jacayl" Waxa ay la micno tahay inuu u khawano doonaa aniga iyo u bixi doonaa ka gacmahayga
Haddii aad aragto xidiga toogashada ah, indhaha oo waxaad ka samaysaa doonayo ah. Waxaa soo shaqeeyay ii, waxaana doonay inaan Ceebeeyo aad u!
Waxaan Ilaah ka codsaday Rose & iima beer. Waxaan Ilaah weydiiso dhibic biyo & iima Bad ah. Waxaan Ilaah 4 malaggii ah & iima aad!
Darling, haddii aad tahay gabadha labaad ee ugu fiican iigu, Haddaba waa ayo kan ugu wanaagsan? Jawaabtu waa cidna, maxaa yeelay, waxaad had iyo jeer waxay noqon doontaa gabadha ii fiican aniga.
Haddii jacayl waa cudur ka dibna waxaan ahay mid aad u xanuunsan. Laakiin anigu ma doonayo daawo oo aan qaadan doonaa kiniin kasta.
Jacaylku waa sida qufac, la qarin karo.
Messages Love u saaxiib
Waxaad dhigi lahaa wax aan dunida oo dhan hareeraheeda ku tag. Waxaad dhigi lahaa wax aan dunida oo dhan weli taagan. Waxaad dhigi lahaa wax aan qiimo ku nool. Waxaad igu qofka aan ahay sameeyo! Waan ku jeclahay.
Sidee baan u jeclaan lahaa in aan noloshayda oo dhan ku qaataan yaabaa hoos cirka daawashada xiddigaha idiin dulqaadan doonaa? Waxaad tahay qofka ugu horeeya iyo kan ugu dambeeya waxaan doonayaa in aan nolosha. Jeclaada aad u jeclahay.
Haddii aan kor u gaari karo oo qaban xiddiga ah mar kasta oo aad sameeyey iga qosol, samada fiidkii oo dhan u noqon lahaa in timirta ahaa oo gacantayda.
Waxaan rabnaa in aad ogaato in tan iyo maalintii aan la kulmay ayaan u dhacday si qoto dheer jacayl kula. Waxaad tahay nolosha, qalbigayga, naftayda.
Ka hor inta aan aad u la kulmay marnaba waan ogaa sida ay ahayd; si loo eego qof oo ilka aan sabab lahayn.
Aad ayaan u faraxsanahay oo aad jacayl ahay. Waxaad tahay malab si jaceyl, waxaan dareemayaa xishooday sida aad i jeceshihiin.
Meel i waayo, qalbigaaga oo aan in aad maskaxdaada u maskaxdaada si fudud illoobaa Laakiinse qalbiga mar walba xusuusan tahay. Waan ku jeclahay.
Lisen igu, mister. Waxaad tahay aan geesiyad dhalaalaya oo hubkiisa. Ha iloobin.
Mar kasta oo aan aad u arko, waan ku jeclahay in ka badan ka hor.
Mararka qaarkood ma aniga qudhaydu arki kartaa markii aan kula ahay. Waxaan uun aad ka arki kartaa.
Sidee inuu ka soo kabsado Messages Love lumay ka iPhone iyo Android Phones
Haddii aad ogaato in fariimaha qoraalka ah, iMessages, ama taariikhda chat WhatsApp ah ee aad taleefan ka maqan, ama aad si qalad ah iyaga tirtiray, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) ama Wondershare Dr.Fone for Android (kabashada xogta Android) ( download it halkaan ) si ay u soo kabsado si aad u computer sida faylasha elekterikal. Taxane Wondershare Dr.Fone waa kala duwan ugu horeysay ee software xirfad Adduunka ee inuu ka soo kabsado faylasha iyo xogta laga telefoonada iyo kiniin.
Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka maxkamad free version si ay u arkaan in ay ka heli kartaa in aad la tirtiro fariimaha qoraalka ah, ama ma
Sidee inuu ka soo kabsado fariimaha qoraalka ka iPhone
Sida loo badbaadi fariimaha qoraalka ka iPhone
> Resource > iPhone > Messages Love u saaxiibtiis, saaxiib, iyo naagtiisii, iyo Sayga